Sida Loola Socdo Waxqabadkaaga Raadinta Dabiiciga ah (SEO)
Ka shaqaynta sidii loo hagaajin lahaa waxqabadka dabiiciga ah ee nooc kasta oo goob ah - laga soo bilaabo goobo mega oo leh malaayiin bog, ilaa goobo ganacsi, ilaa meherado yaryar iyo kuwa maxalliga ah, waxaa jira hab aan qaato oo iga caawiya inaan la socdo oo aan soo sheego waxqabadka macaamiishayda. Ka mid ah shirkadaha suuqgeynta dhijitaalka ah, ma aaminsani in habkaygu yahay mid gaar ah… Habkaygu ma aha mid adag, laakiin waa
Haddana mar labaad, waxaan la shaqeynayaa ganacsi ka tagaya hay'ad oo ila shaqeynaya si aan u wanaajiyo joogitaankooda YouTube… iyo, haddana, hay'adda ay la shaqeynayeen waxay leedahay lahaanshaha dhammaan akoonadooda. Waxaan ka cabanayay hay'ado sidan sameeya in ka badan toban sano hadda waxaanan kula talinayaa ganacsatadu inaysan waligood sidan sameyn. Sidoo kale meheraddu waligeed ma siinayso galitaan iyo fure si ay u maamusho koonto kasta. Macnaha ku habboon
Infographic: 21 Istaatijiyadda Warbaahinta Bulshadda ee u Baahan Yahay Suuqgeeye Walboo 2021
Talaado, Juun 29, 2021 Talaado, Juun 29, 2021 Elena Teselko
Shaki kuma jiro in saameynta warbaahinta bulshada sida kanaalka suuqgeynta ay kordheyso sanad walba. Qaar ka mid ah aaladaha ayaa soo baxa, sida TikTok, qaarna waxay la mid yihiin Facebook, taasoo horseedaysa isbeddel horumar leh oo ku yimaada dabeecadaha macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, sanado badan dadku waxay u barteen astaamaha lagu soo bandhigo warbaahinta bulshada, sidaa darteed suuqleydu waxay u baahan yihiin inay ikhtiraacaan habab cusub si guul looga gaaro kanaalkan. Taasi waa sababta isha loogu hayaa isbeddellada ugu dambeeyay ay muhiim u tahay suuqgeyn kasta
Sidee Noocyada Ciyaaraha-Ciyaaraha ah uga Faa'iidaysan karaan La Shaqaynta Saameeyayaasha Ciyaarta
Khamiis, Juun 24, 2021 Khamiis, Juun 24, 2021 Polina Haryacha
Saameeyayaasha ciyaaraha ayaa adkaanaya in la iska indhatiro, xitaa sumadaha aan ciyaarta ahayn. Taasi waxay u muuqan kartaa wax lala yaabo, markaa aan sharaxno sababta. Warshado badan ayaa ku rafaaday Covid dartiis, laakiin ciyaaraha fiidiyowga ayaa qarxay. Qiimaheeda waxaa la saadaalinayaa inuu dhaafi doono $ 200 bilyan sanadka 2023, kobaca oo ay awoodaan qiyaastii 2.9 bilyan oo ciyaartoy adduunka oo dhan sanadka 2021. Warbixinta Suuqa Ciyaaraha Caalamka Kaliya maahan tirooyin kaliya oo xiiso u leh sumadaha aan ciyaaraha aheyn, laakiin nidaamyada kala duwan ee deegaanka. Kala duwanaanta waxay abuurtaa fursado lagu soo bandhigo